Madasha Xisbiyadda oo Baarlamaanka ku booriyay in ay si dhow ula socdaan tallaabo kasta oo ay qaadayso “Xukuumadda Xil-Gaarsiinta” – Kalfadhi
Madasha Xisbiyadda oo Baarlamaanka ku booriyay in ay si dhow ula socdaan tallaabo kasta oo ay qaadayso “Xukuumadda Xil-Gaarsiinta”
August 2, 2020 August 2, 2020 Hassan Istiila
Madasha Xisbiyada Qaran ee Soomaaliya oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay in xukuumadda hadda jirta ay tahay xukuumad Xil-Gaarsiin ah, mana lahan awood sharciyeed oo ay ku qaadan karto go’aanno masiiri ah ama ay ku meel marin karto guddi Dastuuri ah oo horey magacaabistiisii looga gaabiyay.
Madasha ayaa sheegtay in ay aad uga walaacsantahay tallaabooyin ay ku sheegtay sharci darro ee ay xukuumadda Xil-Gaarsiintu ku dhaqaaqdey shirkeedii Golaha Wasiirrada ee qabsoomay 30/07/2020 oo ay ku magacaabeen hay’ado Dastuuri ah sida Hay’adda Adeegga Garsoorka iyo Hay’adda Batroolka Soomaaliyeed.
Kooxaha Bulshada Rayadka Soomaaliyeed iyo xisbiyadda Siyaasadda ayaa walaac ka muujiyay Xubnaha Golaha Adeega Garsoorka dalka Soomaaliya oo dhawaan golaha wasiirrada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay meel mariyeen.
Gudoomiyaha Isu taga Ururada Bulshada Rayadka Soomaaliyeed Cismaan Muxyadiin Shaatax ayaa sheegay in walaacooda ugu weyn uu ku qotomo meel marinta Golaha Adeega Garsoorka taasi oo keeni karto dhibaato iyo kala fogaansho hor leh.
Madasha Xisbiyadda ayaa war-saxaafadeedkooda ku sheegay in Baarlamaanka Federaalka ay si dhow ula socdaan tallaabo kasta oo ay qaadayso xukuumadda Xil-Gaarsiintu, isla markaana ay kula xisaabtamaan si joogta ah hawlaha ay qabanayaan inta Ra’iisul wasaare laga soo magacaabayo.
Guddomiyaha Golaha Shacabka oo Ummadda Soomaaliyeed ugu hambalyeey munaasabadda Ciidul-adxa